ဘောလုံးအားကစားကွင်းထုတ်လုပ်မှုနှင့်စက်ရုံအတွက်တရုတ်ဘောလုံးအားကစားအတု Turf / မြက်ခင်း၊ မြက်ခင်း | SAINTYOL
ဘောလုံးအားကစားအတွက်ဘောလုံးအားကစားအတု Turf / မြက်၊ မြက်ခင်း
မော်ဒယ်နံပါတ် သဘာဝ -50 အရောင်အပူချိန်4Dynamic အရောင်များ
လျှောက်လွှာ ဘောလုံး ချည် 12000dtex
ကြိုးအမြင့် 50mm စက် gauge ၅/၈ လက်မ
အမျိုးအစား သဲမရှိဘဲ အတုမြက်ခင်းဖောင်ဒေးရှင်း ကျောက်စရစ်အခြေစိုက်စခန်း
သစ်သား၏ texture PE ကျောထောက်နောက်ခံ စစ + အသားတင်အထည်
ပစ္စည်းအမှတ် သဘာဝ -50
ပုံအကြောင်းအရာ UV Resistance PE Monofilament ကြိုး
ကြိုးအရေအတွက် (Dtex) 12000 dtex
ကြိုးအမြင့် (mm) ၅၀ (± ၂ မီလီမီတာ)
စက်ကိရိယာ 5/8 လက်မ
တစ်မီတာနှုန်းအပေါက် (LM) 150
သိပ်သည်းဆ Tufts / m² 9450
အရောင်2အရောင်
40'GP (m²) အတွက်တင်သောပမာဏကို 5500-7000sqm
အာမခံချက် ၈-၁၂ နှစ်
SYSTURF SAINTYOL SPORTS Co. , LTD (clover lawn ဟုလည်းခေါ်သည်) သည်တရုတ်နိုင်ငံတွင်အတုအညှောထုတ်လုပ်သည့်ပညာရှင်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ၁၉၉၂ တွင်၊ “ သုံးခု” သည် ၂၅ နှစ်အကြာမြေယာပစ္စည်းရောင်းဝယ်မှု (အလုပ်ရှင်သုံး ဦး) တွင်လုပ်ကိုင်သောလက်လီအရောင်းဆိုင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိနိုင်ငံပေါင်း ၄၀ ကျော်မှကျွမ်းကျင်သူထုတ်လုပ်သူများ (လူပေါင်း ၁၅၀ ကျော်၏အသင်းအဖွဲ့အရွယ်) သုံးစွဲသူများ၏ထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးမှု၊ ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ရောင်းအား
ကျနော်တို့လိမ်စက်တွေပြင်သစ်ကနေတင်သွင်း။ လိမ်ချည်သည်သဘာဝမြက်နှင့်တူပြီးပိုမိုကောင်းသောလုပ်ဆောင်ချက်များရှိသည်။ ၎င်းသည် St. Orr မြက်ခင်း၏အရည်အသွေးကိုထိရောက်စွာတိုးတက်စေလိမ့်မည်။ Shengying Sports Co. , Ltd. (SYS) သည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိနိုင်ငံပေါင်း ၃၀ ကျော်တွင် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည့်တရုတ်နိုင်ငံ၏အတုထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဒီဇိုင်းပညာရှင်ဖြစ်သည်။ Artf terf နှင့်အခြားကြမ်းခင်းပစ္စည်းများသည်အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားပြီးအရည်အသွေးကောင်းသည်။ Seth အတုသည်မြက်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ရောင်းချမှု ၀ န်ထမ်းများကိုလေ့ကျင့်ထားသောအတုမြက်ခင်းလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာအနှံ့အားကစားနှင့်ရှုခင်းများအတွက်ကျွမ်းကျင်သောအတုများကိုမြက်ခင်းပြင်ပေးပြီးပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပကုန်သွယ်မှုရောင်းအားကိုထောက်ပံ့သည်။ SYS-TURF တွင်မြက်ကြိုးအမျိုးမျိုးနှင့်ကမ္ဘာ့အဆင့်မီပညာရှင်များထုတ်လုပ်သည့်လိုင်းများရှိပြီး ၆-၇၀ မီလီမီတာအမြင့်၊ ၄ မီတာအကျယ်နှင့်အနံ ၄.၄ အနံ၊ , 5/16 ", 3/16", 5/32 "နှင့် 1/5" ။
၁။ အတု Turf တပ်ဆင်မည့်မြေကိုတိုင်းတာပါ
2. အတု turf လိပ်ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်fitရိယာ fit ရန်ကချုံ့။
၃။ ကော်ကိုမြေပေါ် ကပ်၍ မြက်ခင်းပြင်ကိုကပ်ထားပါ။
၄။ တိပ်ခွေကိုမြေပြင်ပေါ်တွင် ကပ်၍ ကော်ကိုကပ်ပါ
5. အဆစ်မမြင်ရအောင်လုပ်နှင့်နယ်နိမိတ်မပါဘဲအတုမြက်ဖယ်ရှားလိုက်ပါ။ တပ်ဆင်ပြီးနောက်သင်အတုသည်မြက်ပင်ကိုသဘာဝကျသကဲ့သို့သက်ရှိမြက်နှင့်တူကြောင်းတွေ့ရမည်။ အကြောင်းပြချက်များစွာအနေဖြင့်အတုမြေဆီလွှာလိုအပ်ချက်ကိုထိန်းသိမ်းရန်မှာအလွန်အရေးကြီးသည်။ ၎င်းတို့ကိုအောက်ပါအတိုင်းမီးမောင်းထိုးပြနိုင်သည် - -Life-Performance-Safety ထိန်းသိမ်းပြုပြင်မှုမရှိခြင်းသည်လူလုပ်သော ၀ က်ဘ်ဆိုက်များ၏သက်တမ်းကိုများစွာတိုစေလိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်ဒီကိစ္စမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်။ ထိရောက်သောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသည်တပ်ဆင်မှုသက်တမ်းကိုအမြင့်ဆုံးဖြစ်စေပြီးကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းသောသက်တမ်းများစွာကိုရရှိလိမ့်မည်။ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစနစ်သည်အောက်ပါရိုးရှင်းသောစည်းမျဉ်းများပေါ်တွင်အခြေခံသည် - မျက်နှာပြင်ကိုသန့်ရှင်းစွာထားပါ - အဆာဖြည့်ခြင်းအဆင့်ကိုအဘယ်ကြောင့်သင်ပြုပြင်လိုသနည်း။ ဖိုင်ဘာဒေါင်လိုက်ကိုထိန်းသိမ်းထားပါ
ရှေ့သို့ 40mm Height Landscape အစိမ်းရောင်မြက်များ၊ မြက်ခင်းပြင်ဖန်တီးထားသောမြက်၊ မြက်ခင်းပြင်
နောက်တစ်ခု: Two-tone 60mm တာရှည်ခံအားကစားဘောလုံးဘောလုံးဘောလုံးအတု GrassTURFlawn
လက္ကားစျေးနှုန်းများအားကစားအတု / မြက်ခင်းပြင် / အားကစားအားကစား
ဖြည့်စွက်ခြင်းမရှိသောအတုမြက်ခင်း / မြက်ခင်း၊
အတု Turf မြက်မြက်ခင်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကြမ်းပြင် ...
Two-tone 60mm တာရှည်ခံအားကစားဘောလုံးဘောလုံးအနုပညာ ...
PA ကအစိမ်းရောင်ဂေါက်သီးလုံးဂေါက်သီးကွင်းကို Artifici ...